Thomas Cook otu izu gachara: Ebee ka anyị nọ ugbu a?
Location: Mbido » Ịdee » Safety » Thomas Cook otu izu gachara: Ebee ka anyị nọ ugbu a?
Thomas Cook, hiwere na 1841, bụ otu n'ime azụmaahịa ezumike kachasị ukwuu n'ụwa nwere ndị ọrụ 21,000 na mba 16 gụnyere 9,000 na UK na karịa ndị ahịa 22 nde kwa afọ.
Thomas Cook gbara ụlọ nkwari akụ, ebe ntụrụndụ, na ụgbọ elu maka nde mmadụ 19 kwa afọ na mba iri na isii.
Debtgwọ ụgwọ ụgwọ ijeri £ 1.7 ya hapụrụ ya maka ihe ndị gụnyere Brexit ejighị n'aka na paụnd na-adịghị ike, na-amanye ya ka ọ bụrụ nnabata nnapụta na-ada site n'aka Fosun, onye nwe China nke Club Med. Akwukwo Thomas Cook siri na 100 rue 3.50 GBX si na ahia oge 08: 00 na Septemba 24, 2019.
Otu nkwupụta na weebụsaịtị Thomas Cook Group kwuru na ndị otu ahụ na-arụ ọrụ "yana ọtụtụ ndị isi nketa oke na ngwụcha izu ikpeazụ" iji nweta okwu ikpeazụ na nyochaghachi na nhazi nke ụlọ ọrụ ahụ. Ruo Fraide, ụlọ ọrụ ahụ na-akparịta ụka onye nwe ya kachasị ukwuu, Fosun Tourism Group na ndị mmekọ ya; Cooklọ akụ ịgbazinye ego Thomas Cook; na imirikiti ndị 2022 na 2023 ndị na-ede akwụkwọ gbasara akwụkwọ maka arịrịọ maka oge ịnọ na nche nke £ 200 nde n'elu ntụtụ £ 900 nde nke isi obodo ọhụrụ.
“N’agbanyeghi nnukwute mbọ, mkparịta ụka ndị a arụpụtabeghị nkwekọrịta n’etiti ndị nwere ụlọ ọrụ na ndị chọrọ inye ego ọhụrụ. Ya mere, kọmitii ụlọ ọrụ ahụ kwubiri na ọ dịghị ihe ọzọ ọ ga-eme ma ọ bụghị ịme ihe iji banye na mmanye mmanye ozugbo.
Ndị bụbu ndị isi Thomas Cook, ndị nyocha ya na ndị na-ahazi ego ya ga-eche ajụjụ sitere n’ihu ọha site n’aka ndị omeiwu gbasara ọdịda ya. Kọmitii ahụ, nke onye ọrụ Labour MP Rachel Reeves duziri, kwuru na nyocha ya ga-achọ ịjụ ndị isi ụlọ ọrụ ahụ gụnyere onye isi oche, onye isi ego, na onye isi oche, yana ndị nyocha ya, PWC na EY; Reportlọ Ọrụ Na-ekwupụta Ego Ego; na Ọrụ Insolvency, mgbasa ozi Bekee kọrọ.
Nwaanyị Reeves kwuru, sị: "N'ime nkụda mmụọ nke ndị ezumike na nhụsianya nke ọtụtụ puku ndị ọrụ na-efunahụ ọrụ ha, ọdịda Thomas Cook ekpughela ihe yiri akụkọ nhụsianya nke anyaukwu ụlọ ọrụ na-ewelite ajụjụ siri ike banyere omume nke Thomas Cook."
Onye isi ochichi Switzerland Fankhauser na ndị isi nduzi ndị ọzọ nwere ike ịnwe nyocha site na Council Financial Reporting Council maka ego ole ha gosipụtara nye ndị na-etinye ego gbasara ego Thomas Cook.
Onyeisi ụlọ ọrụ ahụ kwuru, sị: “can nwere ike ịkọcha ọtụtụ ihe. Ma m na-akwanye ihe niile.
A tụbara m ihe niile m tinyere n'ime ya kemgbe ọnwa atọ gara aga. Echeghị m na anyị dịka ụlọ ọrụ mere ihe na-adịghị mma. ”
Hedonism ejiri aka rụọ na ebe nrụọrụ weebụ Thomas Cook
N'ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Thomas Cook ka na-arụ ọrụ ụbọchị mgbe ọ daa, ọ gaghị akasi onye ọ bụla obi ịgụ:
Anyị ga-anọ ebe ọ bụla ị chọrọ anyị. Ndi otu anyi di gburugburu uwa, 24/7.
Anyị nwere obi ụtọ ime ka ị nwee obi ụtọ & anyị na-ekwe nkwa itinye gị n'obi nke ihe niile anyị na-eme.
Oge ezumike gi putara uwa nye anyi.
Anyị ga-amasị gị ịnabata gị ọzọ & na-agba mbọ iji zitere gị n'ụlọ na oké echeta nke gị ezumike.
Pụrụ ịdabere: Anyị na-elekọta. Can nwere ike ịtụkwasị anyị obi mgbe niile ịgwa gị eziokwu.
Mgbe 2020 lekwasịrị anya na-agụ:
Anyị ga-etinye onye ahịa ahụ n’obi anyị ma nye aka na obodo ebe anyị bi na ọrụ anyị.
Ma nke a abụghị ikpe.
Ndị isi tinyere nde £ 47 ụgwọ na ụgwọ site na nnukwu njem njem ahụ tupu ọdịda ahụ hapụrụ 150,000 Brits tọrọ atọ. Ndị ahịa Thomas Cook boro ndị ọrụ ụgbọ elu ebubo na ha na-akwụ ụgwọ na ụlọ ọrụ ezumike ahụ nwụrụ mgbe ha nwesịrị nnukwu ego iji depụta ụgbọ elu ndị nnọchi, akụkọ gụrụ.
Otu njem njem Britain, nke kwụsịrị ọrụ na Mọnde gara aga mgbe ha nwetaghị ego bụ otu n'ime isi mmalite ndị njem nleta na Spain na-eweta ihe ruru nde ndị njem 3.6 na mba ahụ kwa afọ.
Naanị awa ole na ole tupu ọ daa na isi mmalite nke nkwupụta nnapụta kwuru na Thomas Cook erutela nkwekọrịta iji nweta £ 200m, site na enyemaka sitere na gọọmentị Turkey na otu ndị na-ahụ maka ndị ọbịa na Spain nke ndị ozi na Madrid kwadoro. Ha dị njikere itinye ego iji belata mmebi nke ụlọ ọrụ njem ha. N'ime ndị ụlọ oriri na ọ Spanishụ hotụ ndị Spain ahụ bụ Don Miguel Fluxa nke Iberostar na Majorcan hotelier Gabriel Escarrer Juliá bụ ndị hiwere azụmahịa nke ga-abụ Meliá Hotels.
Mana atụmatụ ahụ akwadoghị gọọmentị Britain.
Ka ọ dị ugbu a na Carnary Islands…
Companieslọ ọrụ ndị Spain, ọkachasị na Canary na Balearic Islands ebe Thomas Cook na-ewetara ndị ọbịa nde mmadụ 3.2 kwa afọ, na-atụ egwu ọdịda ahụ nwere ike ibute nde mmadụ nde euro, ebe ndị ọrụ CGT nke Spain dọrọ aka na ntị na ọtụtụ puku ọrụ nwere ike ịnọ n'ihe egwu
Ka ọ dị ugbu a, na Canary Islands, otu ndị njem Britain na-ahụ maka 25% nke ndị ọbịa niile, dị ka ngalaba ụlọ nkwari akụ ahụ. Na Canary Islands, ndị ọrụ ọrụ CGT dọrọ aka ná ntị na mmechi nke ụlọ ọrụ ahụ ga-emetụta nkwụsi ike ọrụ nke ihe karịrị 10% nke ndị ọrụ na mpaghara ụlọ nkwari akụ nke na-ewe ihe dịka 135,000 na agwaetiti ahụ.
Ọnọdụ dị na Canary Islands dị oke egwu, nyere na ụgbọ elu ụgbọ ala dị ala ọnụ Ryanair ekwuputala atụmatụ iji mechie ntọala ya na agwaetiti Tenerife. Ọ bụrụ na Condor kwụsị ọrụ Canary Islands, enwere ike ịhapụ mpaghara ahụ na-enweghị oke oke ụgbọ elu njikọta. Onye isi oche nke Njikọ Hotellọ nkwari akụ na njem nleta (CEGHAT), Juan Molas, gwara gọọmentị Spanish na Mọnde ka ọ kpọọ Ryanair ka ọ gbanwee mkpebi ya wee rịọ ka ndị isi ụgbọ elu Spanish AENA belata ụtụ isi ọdụ ụgbọ elu site na 40%.
Tsunami akụ na ụba nke dakwasịrị akụ na ụba Spanish na mmetụta nke nde euro 50 naanị na Canary Islands, ga-ahụ karịa ụlọ oriri na ọ hotelsụ 500ụ 13,000 na-efu ego, ndị nọ n'ime kwere. Nke a ga - ahapụ ndị ọrụ XNUMX na - enweghị ọrụ, mgbasa ozi Spanish na - akọ.
Dabere na data sitere na Njem Nleta Nleta Anya, Exceltur, Thomas Cook ji ihe karịrị € 200 nde na ngalaba ndị njem nleta na Spanish. Isi mmalite sitere na ụlọ ọrụ ahụ kwuru na Thomas Cook doziri akwụkwọ ọnụahịa mgbe ụbọchị 90 gachara, nke pụtara na ọtụtụ akwụ ụgwọ sitere n'oge oge ezumike anaghị akwụ ụgwọ.
"Anyị na-emegide otu n'ime nsogbu akụ na ụba kasịnụ nke ndị Canaries chere ihu," ka Melisa Rodríguez, onye omeiwu Tenerife maka nnọkọ otu ụmụ amaala etiti. “Pasent iri isii nke ebe ndị njem nleta anyị na-enye sitere na ndị na-eme njem, na Thomas Cook bụ onye nke abụọ na-eme njem nlegharị anya. Anyị nwere ike na-ekwu maka ọdịda 8% na GDP, nke ga-abụ nnukwu nsogbu akụ na ụba. "
Ignacio López, onye odeakwụkwọ ukwu nke gọọmentị ọrụ nke nnukwu ndị ọrụ na-ahụ maka ndị ọrụ, kwuru hoo haa, sị: “Ihe a bụ ihe ọhụrụ nye anyị. Anyị ahụtụbeghị ụdị ihe a mbụ; Ahụtụbeghị ọdịda otu onye ọrụ njegharị buru ibu dị ka Thomas Cook. ”
Canary Islands nke Spain, ebe oge dị elu site na Ọktoba ruo Ista, ka ọdịda na-akawanye njọ. Francisco Moreno, bụ onyeisi nke nkwukọrịta okwu na họtel họtel ahụ Lopesan, nke na-elekọta ụlọ ọrụ iri na asaa na Canary Islands, kwuru, sị: “Ọ na-eme ka anyị ghara inwecha ikike ịzaghachi.
Ọ bụ ezie na 60% nke ọnụ ọgụgụ ahụ ji ụgwọ maka ụlọ ọrụ nkwari akụ, ụlọ ọrụ ụgbọ ala, ọrụ mgbazinye ụgbọ ala, ntuziaka, na njegharị - na okwu ndị ọzọ ọrụ ndị ọrụ njem na ngwugwu ezumike ha emetụtala.
Ndị Canaries abụghị naanị mpaghara na-enwe nrụgide. Ndị ọchịchị na Mallorca na-atụ anya na ndị njem 25,000 ga-atụfu n'ọnwa Ọktọba, enwekwara ejighị n'aka na Gris, Cyprus, Turkey, na Tunisia.
Ma gini banyere Thomas Cook hotels?
Thomas Cook bụ otu n'ime ndị ọrụ ụlọ ọrụ nkwari akụ 5 kacha ukwuu na Spain, yana ụgbọ elu 3 (Condor, Thomas Cook Airlines, na Thomas Cook Airlines Scandinavia), na ụgbọ mmiri nke ụgbọ elu 105. Na Spain, otu a na-elekọta ụlọ nkwari akụ iri isii na atọ, ọtụtụ n'ime ha bụ otu n'ime ụdọ nkwari akụ asatọ. Hotelslọ oriri na nkwari akụ ndị a na-ewe ndị ọrụ 63 ọrụ ma na-enye 8 nke akwa 2,500 nke Thomas Cook nyere na Europe. Ihe ọzọ bụ na Thomas Cook emeela ihe karịrị nde otu nde maka ọnwa ndị na-abịanụ, ọtụtụ n'ime ha nọ na Spen. Chainlọ nkwari akụ Meliá kwupụtara na Mọnde na ọ ga-akwụghachi ụgwọ ndapụta nke ndị ahịa Thomas Cook bụ ndị na-eme atụmatụ ịnọ na họtel ahụ.
Ego abughi naanị ụlọ ọrụ nkwari akụ kamakwa ụgwọ ọrụ yana AENA, onye osote onye isi oche nke Exceltur, José Luis Zoreda, kọwara ụlọ ọrụ mgbasa ozi Spanish EFE.
Thomas Cook emeela ka azụmahịa ya gbasaa ile ọbịa yana ihe dị ka ụlọ nkwari akụ 200 nwere na pọtụfoliyo ya. Companylọ ọrụ ahụ kwalitere Thomas Cook Hotel Investments, ihe jikọrọ aka na ụlọ ọrụ mmepe ụlọ nkwari akụ LMEY nke Switzerland, iji kwado pọtụfoliyo ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. N’ọnwa Juun, Thomas Cook kwupụtara atụmatụ itinye ego nde 40 n’ime ụlọ nkwari akụ ndị nwere njikwa na Spain site na oge ọkọchị 2020.
LMEY Investments AG na Zug, Switzerland, nke sitere na Dutch, nwere Club Aldiana, ụdị nke ezumike klọb na Austria, Greece, Tunisia, Spain, na Saịprọs wee malite mmekọrịta "atụmatụ" na Thomas Cook na 2017.
Azụmahịa nke furu efu otu nde na iri ise nke Britain wee weta Thomas Cook pasent 150 bụ iji nweta oke mbak n'ahịa nke tufuolarị mmasị nke afọ gara aga n'ihi Internetntanetị na ụzọ dị iche iche iji dee njem.
Companylọ ọrụ ahụ nọgidere na-akwọ ụgbọala iji bulie ụlọ ọrụ nke aka ya na nke azụmahịa. Thomas Cook enweworị ihe karịrị ụlọ nkwari akụ 50 na ime ụlọ 12,000 gafee ụdị 8 ya na Spain, na-eme ụlọ ahịa ya na ebe ntụrụndụ ya otu n'ime ụlọ ọrụ nkwari akụ 5 na-abụghị nke ụlọ. Ma ugbu a, ihe niile adịkwaghị.
Dabere na mgbasa ozi Britain, "Ndị isi nchịkwa Thomas Cook kwesịrị ịkọwa ihe kpatara eji mechie ụlọ ọrụ ụgbọ elu UK mana nke German kwere ka ọ nọgide na-arụ ọrụ," ka odeakwụkwọ ukwu nke njikọ ndị ọkwọ ụgbọ ala BALPA, Brian Strutton kwuru.
“Kedu otu esi enweta ego ya, maka na o dịka na ọ nweghị ihe fọdụrụ n’akpa ụlọ maka ndị ọrụ UK? Gini mere gọọmentị UK enweghị ike inye ụdị nkwado nkwado dịka gọọmentị German mgbe amaara nke ọma na Thomas Cook nwere onye ahịa China kwụ n'ahịrị? Ọ bụ asịrị mba, ”Strutton kwukwara.
Thomas Cook Airlines Scandinavia nwere ọdịnihu. Ka ọ dị na Septemba 23, 2019, ụgbọelu ndị Scandinavia kwụsịrị ụgbọ elu niile ruo mgbe ọkwa ọzọ dị na ya mechara pụta na ụgbọ elu ahụ akwụsịla ọrụ yana ụlọ ọrụ nne na nna Britain. Ndị ọzọ enyere aka na-arụ ọrụ.
Ma ọ bụghị ogologo oge.
Nyaahụ, Thomas Cook Germany mara ọkwa mkpuchi na ịkwụsị azụmahịa. Ndị ahịa ndị gbara ezumike ezumike ma ha ahapụbeghị, enweghị ike ife efe ma ọ bụ gaa ezumike ruo mgbe ọnwa Ọktọba 31, 2019 kwuputara ya.
Ha gbakwụnyere, sị: “Ọ dị mwute na anyị akagbuola akwụkwọ Tui na First Choice nke gosipụtara ụgbọ elu Thomas Cook maka ndị ahịa ọ bụla n'ihi njem ha site na Mọnde, Septemba 23, ruo Ọktọba 31.
Ma gịnị ga-eme na November 1?
Onweghi onye ma.
Ọtụtụ puku ndị njem ezumike bụ ndị tinyegoro ma kwụọ ụgwọ maka ezumike ha na Thomas Cook, Neckermann Reisen, Bucher Reisen, ÖGER Tours, Signature Finest Selection, na Air Marin, agaghị enwe ike ịhụ ego ọ bụla ma ọlị. Lọ ọrụ inshọransị na-ekpuchi naanị euro 110, na ego ahụ ga-adị mkpa maka nlọghachi.
Enweghi ike iji ihe nwebisiinka a na-enweghị ikike ederede ederede n'aka onye edemede na site na eTN.
nzukọ fvv - CEO Peter Fankhauser nke Thomas Cook kwuru tinye ndị ahịa obi gị
Hotellọ nkwari akụ a na Gran Canaria ka emechiri foto nwa oge site na ikike Quique Curbelo
Canary Islands Cyprus Germany Gran Canaria Hotel Internet Mallorca Ryanair Spain Thomas Cook Tourism
Ọdụ ụgbọ elu Melbourne nke mbụ na Australia iji 'ndụ' na nyocha nyocha ọhụụ kachasị ọhụrụ
Uber ịgbanwe ụdị ọrụ ya na Taiwan, ya na ndị ụlọ ọrụ tagzi nọ na mpaghara